Namni Ka Biroon Haaraa Itiyoophiyaa Keessaa Vaayiresii Koronaan Qabame
Bitootessa 20, 2020
Itiyoophhiaan nama vaayiresiin koronaa keessatti argame ka biroo haaraan argamuu mirkaneessite. Kunis lakkoobsa namoota vaayiresichaan qabaman sagaliin kan ga’e yoo ta’u shan lammiiwwan biyya alaa sadii immoo lammiiwwan Itiyophiyaa tii.
Instiitiyuutiin eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa akka jedhetti namni boodna vaayiresiin kun keessatti argame dubartii maanguddoo waggaa 85 yoo ta’an biyya alaa irraa deebi’an. Angawoonni mootummaa Itiyoophiyaa lakkoobsa dabalaa jiru, doorsisa lammiiwwan biyya alaa irratti geggeessamuu fi haal yeroo ka biroo ilaalchisuun tuuta oduuf ibsa kennu jedhamee eegama.
Gama biraan biyyoota Afriikaa 36 keessatti vaayiresiin kun kan argame yoo ta’u, walumaa gala namoonni 795 qabamaniiru. Akkuma kanaan Aljeeriyaa keessaa 82, Beeniin 2, Burkinaafaasoo 27,Kaameroon 16, Ripaablikii Afriikaa waaltaa 1, Chaad 1, Koongoo 1, Ekuwatooriyaal Giinii 4 Eswsaatinii 1, Itiyoophiyaa 9, Gaaboon 3 fi Gaambiyaa keessaa nama tokko irratti vaayresiin kun argamee jira.
ETHO-TELECOM Maamiltoota Isaaf Bilbila Irratti Ergaa of Eeggannoo Vaayiresii Koonaa Dabarse
Oromiyaatti Namoonni 4 Mallattoon Vaayirasii Koranaa Irratti Mul’atuu Isaaf Qorannoof Adda Baafaman
ABOn Haala Yeroo Ammaa Itiyoophiyaa Keessa Jiru Irratti Ibsa Kenne
Vaayiresiin Koronaa Addunyaa Irratti Sodaa Waan Uumeef Afriikaan Qoophaa’uu Qabdi: Waaltaa To’annoo fi Ittisa Dukkuboota Afriikaa
Manni-maree Dhimmoota Islaamaa Itiyoophiyaa Vaayirasii Koronaa Ilaalchisee Hubachiisa Of eeggannoo Kenne